10 Tondro malaza indrindra hitsidihana | Save A Train
Home > Travel Europe > 10 Tondro malaza indrindra hitsidihana
Nandeha lamasinina, Fiaran-dalamby Britain, Train Travel China, Train Travel Repoblika Tseky, Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby Alemana, Fiaran-dalamby any Italia, Train Travel Russia, Torohevitra toro-lalana amin'ny lamasinina, Train Travel UK, Travel Europe
Fotoana famakiana: 9 minitra
(Last Nohavaozina: 07/08/2021)
Mampiaiky volana ny maritrano, manan-karena amin'ny tantara, ao amin'ny tanàna tsara tarehy indrindra eto amin'izao tontolo izao, ny 10 mari-toerana malaza indrindra hitsidihana lamasinina izay tokony ho anao bucket list. Avy any Eropa ka hatrany Sina, amin'ny alàlan'ny vavahady malaza indrindra any Berlin, ary mankany amin'ny tanàna voarara, ity misy jery toilika mitsivalana amin'ireo mari-trano izay hahagaga anao.
Tena sarotra ny tsy mahita ity mari-pamantarana mahavariana ity, 300 tilikambo vy avo metatra. Na mandeha amin'ny Le Marais ianao, Andriambavy, na Latin Quarter, ho hitan'ny maso foana ity kisary goavambe Paris ity.
Noho izany, raha mandeha voalohany any Paris ianao, tena hitsidika an'i Eiffel Tower ianao amin'ny antoandro ary amin'ny alina raha hijery ny Eiffel dia hazava avokoa. Ary noho izany, tokony ho vonona tsara amin'ny fitsidihanao ianao ary hahafantatra fa ny fomba tsara indrindra handehanana any amin'ny Eiffel Tower any Paris, na na aiza na aiza any Eropa.
Ahoana no ahatongavana any amin'ny Tilikambo Eiffel By Rail?
Ny tsara indrindra mankany amin'ny Eiffel Tower dia amin'ny lamasinina. The fitateram-bahoaka rafitra any Paris dia tena mahomby sy mahazo aina. Mora be ny mitety ny arrondissement sy ny mari-toerana, ary ny toerana afovoan'i Eiffel Tower ao an-tanàna dia midika hoe mifandray tsara amin'ny lalamby frantsay izy io.
Champ de Mars / Tour Eiffel no gara akaiky indrindra, ary Eiffel Tower dia marina 2 minitra mandeha eo amin'ny gara. Na izany aza, miala eo amin'ny gara Trocadero dia hanolotra fahitana majika bebe kokoa momba ny tilikambo sy ny Seine. Azonao atao ny mitondra ny RER Line C mankany amin'ny Eiffel Tower isaky ny minitra vitsy, ary ny tapakila metro ho an'ny dia tokana dia € 1.9.
2. Torohevitra malaza indrindra hitsidika an'i Rail: Ny rindrin'ny Great China
Ny mariky ny namboarin'olombelona lehibe indrindra eran-tany, ny Great Wall of China no nandray an-tanana 2000 taona hananganana. Ny fananganana rindrina voalohany dia nanomboka tamin'ny taonjato faha-7, ary taty aoriana dia nasiana rindrina fanampiny hanamafisana sy hanovana ny The Great Wall of China ho iray amin'ireo marika lehibe sy mampientanentana eran'izao tontolo izao.
Satria midadasika tokoa ny rindrin'ny Great China, afaka mankafy azy io amin'ny maro ianao toerana manerana an'i Sina, ary afaka mandray hatramin'ny 175 andro hiampitana azy tanteraka. Na izany aza, ny toerana tsara indrindra hijerena ny Great Wall of China dia i Beijing, ny manodidina an'i Beijing, ary ny tanàna toa an'i Badaling. Hamaranana, Ny haben'ny rindrin'ny Great China of China, manan-danja ara-tantara, ary ny famolavolana ivelan'ity tontolo ity dia iray amin'ireo 10 mari-toerana malaza indrindra hitsidihana lamasinina.
Ahoana no fomba ahatongavana any amin'ny rindrin'i Sina Sinoa avy any Beijing?
Tokony handeha any amin'ny Station Huoying ianao amin'ny alàlan'ny metro na mandray ny tsipika Airport Express. Avy eo avy eo amin'ny Station Railway Huangtudian dia mandray ny lamasinina S2 mankany amin'ny gara Stasiun Badaling. Ho hitanao ny fidirana amin'ny Great Wall amin'ny lalana 20 minitra miala ny gara.
3. Torohevitra malaza indrindra hitsidika an'i Rail: The Sistine Chapel Vatican City
Ny fresosy mahafinaritra an'i Michelangelo dia nahagaga ny mpitsidika hatramin'ny ela. The Sistine Chapel in Vatican City no tsara indrindra ny mitsidika ny zoma hariva sy alina amin'ny fahavaratra rehefa tsy dia be olona. Ny zava-kanto lehibe indrindra eran'izao tontolo izao dia azo alefa amin'ny tranombakoka Vatikana, ary tsy mila mamandrika fotoana ianao vao tafiditra ao.
Ny Sistine Chapel dia nomena anarana taorian'ny Papa fahenina, izay nanangana azy tamin'ny taonjato faha-15. Noho izany, ny Fresco mandravaka ny valindrihana ao amin'ny Sistine Chapel dia mampiseho ireo tantara ao amin'ny bokin'ny Genesis. Amin'ny kapoka sy loko miavaka, voatahiry tsara ny fresco, ary afaka mandany andro iray manontolo mankafy ny seho ianao.
Ahoana no fomba ahatongavana any amin'ny trano fiangonana Sistine avy any Roma?
Ny Sistine Chaple dia ao amin'ny tanànan'i Vatican, ivelan'i Roma. noho izany, raha mitsidika avy any Milan ianao, Florence na toeran-kafa any Eropa, tokony handray voalohany ianao a fiaran-dalamby haingam-pandeha ho any Roma. dia, mitondra ny lamasinina avy any Roma Tiburtina mankany Roma St. Gara Pietro, ary izany no 14 minitra mandeha any amin'ny Sistine Chapel.
Avy any Budapest na Viena, tsy mora velively ny nitety an'i Charles Bridge tamin'ny toerana rehetra tany Eropa. Tsy mahagaga izany, raha jerena ny zava-misy fa ny Bridge Charles ao Prague dia iray amin'ireo mari-toerana malaza hitsidihana lamasinina. Ny tetezana vato gothic, - tsangambato, toerana afovoany eo anelanelan'ny Mala Strana sy ny tanàna taloha, vitsivitsy monja amin'ireo antony mahatonga ny voninahiny.
koa, Charles Bridge dia iray amin'ireo tetezana tsara tarehy sy antitra indrindra any Eropa. Ary noho izany, hihaona amin'ireo mpizahatany an-jatony mitady ny tsara indrindra ianao Sary Instagram eo amin'ny tetezana. Eny, amin'ny andro sy taona rehetra, hiditra amin'ireo mpitsidika marobe eto Prague ianao mba hankafy ny iray amin'ireo toerana malaza indrindra eto an-tany.
Ahoana no hanatonana an'i Charles Bridge amin'ny lalamby?
Train Tsidika any Eropa dia tena mahazo aina sy haingana, amin'izay ianao afaka mandeha any Charles Bridge avy amin'ireo firenena manodidina. Avy amin'ny gara lehibe (Amin'ny fiteny eo an-toerana: Station Central), momba ny 13 minitra amin'ny alàlan'ny metro mankany Charles Bridge. Azonao atao ihany koa ny mandeha an-tongotra, dia 25 an-tongotra minitra mankany Charles Bridge avy eo amin'ny gara, saingy tsy soso-kevitra kely kokoa raha tonga avy any Dresden ianao, Budapest, na Zermatt.
5. Torohevitra malaza indrindra hitsidika an'i Rail: St. Katedralin'i Basil's Moscow
Iray amin'ireo lehibe indrindra efamira mahavariana eto amin'izao tontolo izao, ny Kianja Mena any Moskoa no trano misy ny katedraly manaitra indrindra. St. Mahagaga ny katedraly Basil, amin'ny 6 trano fiangonana, voaloko kanto sy kanto amin'ny endrika geometrika. Ny katedraly mahafinaritra dia tsara tarehy amin'ny endrika ivelany sy anatiny, isaky ny trano fiangonana dia voaravaka sary sokitra sy sary hosodoko.
St. Ny Katedraly Basil dia iray amin'ireo sary malaza ao Moskoa ary namboarina ho mariky ny fandresena tamin'ny faharesen'i Terrible Ivan, ny Khan an'i Kazan. Noho izany, satria 1561 manintona mpizahatany an-tapitrisany isan-taona izy io raha jerena 1 amin'ireo mari-toerana mahatalanjona indrindra any Russia.
Ahoana ny fomba hahatongavana any St.. Katedraly Basil?
Ny Katedraly Saint Basil dia ao amin'ny Kianja Mena, ary azonao atao ny mandray ny metro avy eo amin'ny gara Leningradsky mankany Okhotny Ryad. Raha te hahita ny tsara indrindra any Russia ianao, avy eo ny fiaran-dalamby haingam-pandeha avy any St.. Petersburg no fomba fitsangatsanganana.
6. Peterhof Palace Ao amin'ny St.. Petersburg
Ny Versailles Rosiana dia natsangan'i Peter the Great ho fananan'ny fireneny. Eo amin'ny fitsangatsanganana ho any amin'ny Palace Peterhof, hitsidika ny Lower Park ianao, Zaridaina ambony, Channel amoron-dranomasina, sy lapa kely roa – Monplaisir sy ny Lapan'i Marli. Peter the Great mitsidika an'i Versailles tamin'ny taona 1770 ary nahatsapa ny sangan'asa frantsay ho iray amin'ireo mari-toerana malaza any Russia ankehitriny.
Ny lapan'i Tsar dia malaza indrindra amin'ny loharano, Renirano lehibe, sarivongan'ny Baiboly, sy zaridaina. Nopotehin'ny Alemanina io lapa tsara tarehy io tamin'ny Ady Lehibe Faharoa saingy nohavaozina tamin'ny fomba mahomby izy io mba ho lasa Izao tontolo izao UNESCO lova toerana.
Ahoana no ahatongavana any Peterhof?
Ny lapan'i Peterhof dia iray amin'ireo mari-toerana malaza hitsidika an'i St.. Petersburg. Azonao atao ny mandeha mankany Peterhof amin'ny lamasinina avy any amin'ny Station Baltiskiy mankany amin'ny Station Noviy Peterhof.
7. Torohevitra malaza indrindra hitsidika an'i Rail: Roma Colosseum
Ny colosseum dia iray amin'ireo zava-mahatalanjona fito amin'ny tontolo maoderina, noho izany, tsara kokoa ny mitsidika ny Colosseum miaraka amina fitsidihana mitarika. Raha tsy izany, ny tantara manankarena iray manontolo amin'ity fanamboarana lehibe ity dia ho very ho anao. Ny amperora Flaviana dia nanangana ity sangan'asa ity ho toy ny amphitheater, miaraka amin'ny hevitra hiarovana ny vahoaka amin'ny orana sy ny rivotra, ao an-tsaina.
Androany dia afaka mitsidika ny ambaratonga rehetra amin'ny Colosseum ianao, na mankafy azy amin'ny trano fisakafoanana sy kafe maro eo akaiky eo. Ankoatry ny, ny colosseum lehibe indrindra naorina, dia ampiasaina ankehitriny a toerana fampisehoana mozika mivantana. Eto, ho hitanao ny anarana lehibe indrindra eo amin'ny tontolon'ny mozika, toa an'i Elton John.
Ahoana ny fomba ahatongavana any amin'ny Colosseum?
Azonao atao ny mahatratra ny Colosseum amin'ny seranam-piaramanidina roa any Roma, lamasinina. Misy lamasinina miala isaky ny 15 minitra mankany amin'ny gara Tiburtina, ary avy eo amin'ny alàlan'ny metro hatrany amin'ity sarivongana italiana ity. Mazava ho, mora be ny mankany Colosseum avy eo afovoany manan-tantara any Roma.
8. Torohevitra malaza indrindra hitsidika an'i Rail: Lapan'i Westminster any Londres
Ny tsangambato malaza indrindra any Angletera dia ny Westminster Palace sy ny Big Ben Tower. Ny tranon'ny Parlemanta. Victoria Tower sy ny tilikambo malaza manerantany, Big Ben, mamorona ny marika malaza indrindra any Angletera.
Manaraka an'i Thames renirano, miaraka amin'ny manintona an'i London Eye eo akaiky eo, ny toerana manodidina ny Westminster Palace dia mahafinaritra. Ho an'ny fomba fijery mahavariana, mitsidika ny London Eye mandritra ny taona, satria ny sabotsy vao afaka miditra ny Westminster, mandritra ny Jolay sy Aogositra.
Ahoana no fomba hahatongavana any amin'ny lapan'ny Westminster sy Big Ben?
Raiso ny tsipika fantsom-by boribory mankany amin'ny gara Westminster na Trafalgar. Raha tonga avy any amin'ny faritra ambanivohitra London ianao, na aiza na aiza any UK na Eropa, avy eo ny South Western Railway no fomba tsara indrindra handehanana.
9. Shina Tanàna Voarara
Ao afovoan'i Beijing, ho hitanao ny fidirana amin'ny lapan'ny fanjakana lehibe indrindra manerantany. Lehibe noho i Peterhof, ny Louvre, Kremlin, ary ny Vatican, ny lapan'ny tanàna voarara dia manana 980 tranon'ny lapa hijerena. Mifanohitra amin'ireo mari-toerana hafa eto an-tany, ity iray vita amin'ny hazo daholo. miaraka 25 Amperora sinoa nonina tao an-dapa taloha, ny Forbidden City no tranombakoka lehibe indrindra manerantany.
Ilay mari-pamantarana miavaka dia efa nahazo ny anarany tamim-pahamarinana na dia ankehitriny aza. Izany dia vokatry ny zava-misy 40% ny lapa dia mbola voarara ho an'ny mpitsidika. Na izany aza, mbola afaka jerenao ilay faritra manontolo avy eo an-tampon'ny havoana ao amin'ny Jingshan Park. Ny tanàna voarara dia mety tsy iray amin'ireo lapa maro loko sy tsara tarehy indrindra any Eropa, fa mahavariana indrindra.
Ahoana no ahatongavako any amin'ny tanàna voarara?
Shanghai hatrany Beijing dia momba 5 ora lamasinina, fa any Beijing, azonao atao ny mandray ny metro mankany amin'ny tanàna voarara.
10. Torohevitra malaza indrindra hitsidika an'i Rail: Brandenburg Gate Berlin
Brandenburg Gate no marika manan-danja indrindra any Berlin, satria io no mariky ny Gorda vy ary nizara an'i Berlin indray mandeha. Ny vavahady dia nataon'i Frederick William II Mpanjaka Prussian tamin'ny voalohany, tamin'ny taonjato faha-18. Noho izany, ny fomba tsara indrindra hianarana momba ny tantara ao ambadik'ity sary masina ity, vetivety ary mandritra ny fihaonan'ny mpandeha hafa, dia amin'ny fitsangatsanganana an-tongotra.
Amin'ny tolakandro sy amin'ny faran'ny herinandro, ny Pariser Platz dia lasa sehatra ho an'ny mpanakanto sy mpitendry zavamaneno maro ao an-toerana. Azonao atao ihany koa ny mahita ireo mponina eo am-bisikileta amin'ny vavahady ary mipetraka fotsiny, Niady hevitra, miandry ny tara-masoandro hijery amin'ny vavahady.
Ahoana no ahatongavako amin'ny vavahady Brandenburg?
Ny fomba mety indrindra handehanana mankany amin'ny vavahady Brandenburg dia amin'ny alàlan'ny tsipika S-Bahn, ny rafitra metro. Raiso ny tsipika rehetra mankany amin'ny gara Brandenburger Tor.
Famaranana, ny toerana, manan-danja ara-tantara, maritrano, ary ny haben'ny maro amin'ireo mari-toerana ireo dia mahasarika mpizahatany an-tapitrisany isan-taona. Rehefa mijoro eo anoloan'ny mari-toerana tokana ianao, any Eoropa, Rosia, na Sina, gaga fotsiny ianao amin'ny hatsarana sy ny famoronana ny tranonkala tokana.
eto amin'ny Save A Train, faly izahay manampy anao amin'ny drafitra ny iray amin'ireto 10 marika malaza indrindra eto an-tany amin'ny alàlan'ny lalamby.
Te hampiditra ny lahatsoratray bilaogy “Tondro famantarana 10 malaza indrindra hitsidika an'i Rail” amin'ny tranokalanao ve ianao? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmg%2Fmost-famous-landmarks-visit-rail%2F - (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/ru_routes_sitemap.xml, ary afaka hanova ny / de ny / en na / fiteny azy sy ny maro hafa.